ရေမွန်နဲ့အတူ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့် – Cele Posts
ရေမွန်နဲ့အတူ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်
ယနေ့ မှာတော့ rock သီချင်းတွေကို အမိုက်စား သီဆို တတ်တဲ့ Idiots အဖွဲ့ဝင် ရေမွန် တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အရည်အချင်းရှိပြီး ငယ်ရွယ် သူလေးမို့ အားလုံးက နှမြောတသ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြ တာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ တစ်ချို့ကလည်း သူရဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားလေးတွေကို အမှတ်တရရေးရင်း ဝမ်းနည်းကြောင်းတွေ ဖော်ပြခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အနုပညာရှင်များစွာ ကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ် မိကြောင်းကို အမဲရောင် ပရိုဖိုင်များ ချိန်းကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ လူ့လောကထဲကနေ ရေမွန် တစ်ယောက် ပျောက်ကွယ် သွားပေမယ့်လည်း သူရဲ့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အချိန်တိုင်း ရှိနေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်မိတာ အမှန်ပါပဲ ။
အခုလည်း အုပ်စိုးခန့်က သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာလေး ထက်မှာ ရေမွန်နဲ့ အတူ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ လေးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြလာ ပါတယ် ။ ပုံရိပ်လေးတွေ အပြင် Show ပွဲနောက်က သီဆို မဖျော်ဖြေခင် အမှတ်တရ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေ နဲ့အတူ ” အကိုရေ…. မစောလွန်း ဘူးလားဗျာ….ညီကိုအမြဲတမ်း အရင်လို မဆုံးမတော့ဘူးလားဗျာ…ညီတို့အတူတူအမြဲပျော်ပီးစနောက်တာတွေမရတော့ဘူးလားဗျာ အကိုရေ!!! အကို.! Rest In Peace ပါချစ်ဆုံးကိုကြီးရာ …. ” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရမှေနျနဲ့အတူ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ အမှတျတရဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတျတှသေိအောငျ ပွနျလညျမြှဝလောတဲ့ အုပျစိုးခနျ့
ယနေ့ မှာတော့ rock သီခငျြးတှကေို အမိုကျစား သီဆို တတျတဲ့ Idiots အဖှဲ့ဝငျ ရမှေနျ တဈယောကျ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျ ခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ အရညျအခငျြးရှိပွီး ငယျရှယျ သူလေးမို့ အားလုံးက နှမွောတသ စိတျမကောငျး ဖွဈနကွေ တာလညျးတှရေ့ပါတယျ ။ တဈခြို့ကလညျး သူရဲ့ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ သီခငျြးစာသားလေးတှကေို အမှတျတရရေးရငျး ဝမျးနညျးကွောငျးတှေ ဖျောပွခဲ့ကွတာတှရေ့ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ အနုပညာရှငျမြားစှာ ကလညျး စိတျမကောငျးဖွဈ မိကွောငျးကို အမဲရောငျ ပရိုဖိုငျမြား ခြိနျးကာ ဝမျးနညျးကွောငျး ဖျောပွခဲ့ကွတာတှရေ့ပါတယျ ။ လူ့လောကထဲကနေ ရမှေနျ တဈယောကျ ပြောကျကှယျ သှားပမေယျ့လညျး သူရဲ့ ခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုခဲ့တဲ့ သီခငျြးတှကေတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ အခြိနျတိုငျး ရှိနမေယျဆိုတာ ယုံကွညျမိတာ အမှနျပါပဲ ။
အခုလညျး အုပျစိုးခနျ့က သူရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာလေး ထကျမှာ ရမှေနျနဲ့ အတူ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ အမှတျတရ လေးတှကေို ပွနျလညျ ဖျောပွလာ ပါတယျ ။ ပုံရိပျလေးတှေ အပွငျ Show ပှဲနောကျက သီဆို မဖြျောဖွခေငျ အမှတျတရ ရိုကျထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှေ နဲ့အတူ ” အကိုရေ…. မစောလှနျး ဘူးလားဗြာ….ညီကိုအမွဲတမျး အရငျလို မဆုံးမတော့ဘူးလားဗြာ…ညီတို့အတူတူအမွဲပြျောပီးစနောကျတာတှမေရတော့ဘူးလားဗြာ အကိုရေ!!! အကို.! Rest In Peace ပါခဈြဆုံးကိုကွီးရာ …. ” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
ဒီကနေ့မှာပဲ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ကာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဆိုတော်ရေမွန်ရဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ရောက်နေစဉ်အတွင်း သီဆိုခဲ့တဲ့သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်
ယနေ့ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့မှာပဲ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာနဲ့ ဘ၀တပါးကိုကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့မိခင်